01 January, 1970 in Maqaallo by Baidoanews Webmaster
Salaan kadib, waxaan la hadlayaa walaalkay Axmed Deeq, oo ka soo horjeestay mudane Awnuunow baqaqii is jaba jooga ahaa ee uu soo gudbiyey kana hadlayey dhibaatada haysata dadka ku abtirsada Qoomiyadda Digilmirifle marka laga eego dhan kasta oo nolosa
Salaan kadib, waxaan la hadlayaa walaalkay Axmed Deeq, oo ka soo horjeestay mudane Awnuunow baqaqii is jaba jooga ahaa ee uu soo gudbiyey kana hadlayey dhibaatada haysata dadka ku abtirsada Qoomiyadda Digilmirifle marka laga eego dhan kasta oo nolosaha quseeyso.
Qoraalkaga waxaad ku sheegtay inuu ninkaas xil-doon yahay sababta oo qoraalka hadda ugu kacayna tahay in uu xil ku helo. Arrintaas waxaa dhaci karta in aan dad badan oo qoomiyada u dhashay kula qabin, ninkaas mar haddii uu aragtidiisa u soo bandhigay dadkii ay arrintu khuseysay,
waxaan filayaa inuu gut ay waajib xaq ah oo0 loo baahnaa in la muujiyo, waxaa caloshiisa ku qarsoona adiga iyo anigaba ma sheegi karno.
Waxaan kale oo aan ku xusuusinaya in dadka qaar ka mid oo ku abtirsada Qoomiyadda Digilmirifle ay caado joogta ka dhigteen markii qof iyaga ka dhashay wax sameeyo kadaba qaata, asagoo qofkaas haba yaraatee sheegaynin wax cilmi ku dhisan marka laga reebo cambareeyn iyo wax ka sheegid qofkii dhaqdhaaaqa sameeyey shaqsiyadiisa.
Taasna waxay muujinaysaa garaad yare, aqoondarro iyo xaasidnimo qota-dheer. Maalin walba waxaan aragnaa website somali kale leedahay oo qoomiyada wax lagaga sheego, ma arkaysid qof ka jawaabay ama wax ka oranaya, balse markii nin qoomiyada DM ka mid ah wax yar sameeyo waxaad arkaysaa labataneyo qof oo qoomiyadda u dhyashay o wax ka sheegaya ama wax ka qoraya.
Taasna waxay muujinaysaa in ay qoomiyadda dadka ka mid ah ay iyaga oo kaliya isku foofeen, markaas walaal Axmed waxaan oran lahaa anigoo aad u xusmaynaya qoraalkaaga ku jeedi meelaha aan soo xusay ee ku habboon, waxaan ku soo gabageynayaa qormadaydan" HA ISKU FOOFINEE KALA FOOFA".
Injineer Maxamuud Xuseen Caliyow Ibrow
Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida DM Ee UK
NB: Gudiga Abaaraha Kala Xiriir 0025261- 5505339 ama0025261-5578984
Wixii warar ee ku soo kordha kala soco baidoanews.com Isha koowaad ee wararka dhabta ah Ka soo dhiibo wixii fikirkaaga ama macluumaad aad heysowebmaster@baidoanews.com.
Axmed Madoobe oo sheegay in shacabka ay haystaan dhibaatooyin Badan oo dhanka Nolasha ah.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta furaya Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare
Baarlamaanka Puntland oo Ansixiyay Miisaaniyad Sanadeedka Xukuumadda Cusub
Wasiiro xilalkii laga qaaday iyo kuwo cusub oo la Magacaabay
AKHRISO: Magacyadda Taliyeyaasha Cusub ee la Magacaabay
Axmed Madoobe oo ilaalo gaara wata oo Muqdisho ka soo degay!
Dagaalka Cusub Ee Dawlada Soomaaliya Galmudug La Galeyso Oo Axmed Madoobe Fariin U Ah
Roobow oo Xog cusub kasoo Bandhigay Amniga Muqdisho oo sii xumaanaya